Ukuvumba igazi kunye noloyiko kumhlali omtsha wobubi 7 4D Candle - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Ukuvumba igazi kunye noloyiko kumhlali omtsha wobubi 7 4D Candle
Ukuvumba igazi kunye noloyiko kumhlali omtsha wobubi 7 4D Candle
ibhalwe ngu admin January 5, 2017
Ibhalwe nguShannon McGrew
Uninzi lwabalandeli aboyikisayo baye baqhelana ne "Ukungcola kwabahlali" ilungelo lokuthengisa amalungelo, babengenakuba njani?
Indalo iphela ibesisiseko sothusayo okoko umdlalo wevidiyo waphuma ngo-1996 kunye nomdlalo bhanyabhanya ngo-2002. Ngolindelo lomdlalo wabo omtsha,"Umhlali Evil 7: Biohazard", ethatha ababukeli kwindawo yolonwabo ye-4D ngoJanuwari 24, enye inkampani ifuna ukugcwala kwimvakalelo yakho nangakumbi.
Umrhwebi weGeek uMerchoid uza kukhupha a "Umhlali Evil 7: Igazi, ukubila, kunye noloyiko lwe-4D VR Candle" ekubhiyozeleni isavenge samva nje.
Ukuba uphakathi ngaphakathi Ukungcola kwabahlali Akonelanga, abadali begazi lokuvota bayile ngendlela enokuthi ifake imvakalelo yokujoja, ikunike amava aphuculweyo, ngaphaya kwegoggles.
Andiqinisekanga ukuba yinto entle leyo, kodwa kufuneka ndivume ukuba ndinomdla. Abaqambi bathi amavumba aya kukhumbuza “amaplanga amadala, ulusu, kwaye mhlawumbi negazi…” eli linyathelo elingaphezulu kwephunga lezidumbu ezibolayo.
Ngokuphathelele ivumba elisaleleyo? Amakhandlela ayilelwe ukuhlala malunga neeyure ezili-18 ukuya kwezi-20 kunye nexabiso lentengo le- $ 18.99 elingena kakhulu xa ufumana ikhandlela elisemgangathweni- nokuba likwindawo ejikeleze ukufa, intshabalalo, kunye nokungafiyo.
Kubonakala ngathi amakhandlela awathengiswa okwangoku kwiwebhusayithi, kodwa ndinoluvo nje nje ukuba longeziwe, aya kuthengisa, ke qiniseka ukuba uhlala ujonga kwakhona eMerchoid.
Le yinto ekufuneka uyenzile, ngakumbi ukuba ufuna ukudibanisa namava akho okudlala xa udlala "Umhlali Evil 7: Biohazard".
Kum, ndonwabile ukubona amakhandlela ayilelwe emva kweefilimu zethu ezithandekayo kunye nabalinganiswa kwaye ndijonge phambili ekuqhubekeni ndiqokelele amakhandlela azaliswe kukududuzela. Ihlala iqala incoko enkulu.
uhlaziyo: Amakhandlela ayathengiswa eMerchoid, kodwa asekhona ngeNumskull.
ikhandlelaUmhlali Evil 7
I-Cherry Pie Coloured 'i-Twin Peaks' Vinyl, Ngaba i-Cooper Cooper yamkelwe
Ihlelo likaChucky liza kudlala: Teaser kunye neenkcukacha ngaphakathi!